Thermomix मा तरकारीको साथ दाल को पकाउने, धेरै धनी र सजिलो ThermoRecines
Verduras50 मिनेट4 व्यक्ति170२ क्यालोरी
जतिसुकै तातो छ, केहि गर्न छैन भन्न गाह्रो छ लेन्टेजस कोन भर्डुरास Thermomix मा बनेको।
यो फलाम र भिटामिनसहित एक डिश हो जुन सम्पूर्ण परिवारलाई यसको लागि धन्यवाद मनपर्दछ चिल्लो स्वाद.
र दोस्रो ... कसरी केहि बारेमा बगैचा मीटबलहरू तिमीलाई कस्तो छ? रमाईलो गर्नुहोस्!
1 तरकारीका साथ दाल
Thermomix संग हामी छोटो समयमा र प्रयास बिना तरकारी संग केहि स्वादिष्ट दाल, धेरै नरम र पूरै परिवार को लागी सही हुनेछ।
२ गाजरलाई स्लाइसमा काटियो
२ मध्यम आलु पाकेको
हामीले दाल पकाउन कम्तिमा २ घण्टा सम्म भिजाउँछौं।
ती २ घण्टा पछि, हामी तिनीहरूलाई निकाल्छौं र तिनीहरूलाई धोउँछौं।
हामी गिलासमा प्याज, लसुन र तेल राख्छौं। हामी प्रोग्राम Seconds० सेकेन्ड, गति 4। स्प्याटुलाको साथ हामी बाँचेका चीजहरू तल दिन्छौं जुन गिलासको भित्तामा रहन्छ। हामी अब तालिकामा छौं १ minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति १। हामी ढक्कन खोल्छौं र प्याप्रिका थप्छौं (हामी सतर्क रहनु पर्छ ताकि यो शीशाको फेदमा खस्छ र ब्लेडमा हुँदैन) र कार्यक्रम १ मिनेट, भेरोमा तापमान, गति १।
अब धुलेको र पोखिएको दाल, गाजरका स्लाइसहरू, आलु क्युब्स, तेज पात, पानी र नुन थप्नुहोस्। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, १००º, बाँया पालो, चम्चाको गति।
यदि हामी अहिले नै तिनीहरूको सेवा गर्दैनौं भने तिनीहरू अझ मोटो हुन्छन्। हामी तिनीहरूलाई न्यानो पार्दा हामी सँधै थोरै पानी थप्न सक्दछौं।
यी समान मसूरलाई स्वादिष्ट प्युरी बनाउन सकिन्छ। हामीले केवल तेज पात र प्रोग्राम हटाउनु पर्छ, कम्तिमा १ मिनेट, गति १० मा।
यदि तपाईं केहि प्राथमिकता Thermomix मा chorizo ​​साथ दाल, लिंक भर्नुहोस् जुन हामीले भर्खर तपाईलाई छोड्यौं। यो फलफूलहरू पकाउने यो अर्को क्लासिक तरीका हो र यदि तपाईं बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने तिनीहरूलाई अझ राम्रो लाग्न सक्छ।
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: तरकारीहरू, साप्ताहिक मेनू, भेगन, शाकाहारी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » तरकारीहरू » तरकारीका साथ दाल
यहाँ तपाइँ राख्नुभयो:
अब धुलेको र पोखिएको दाल, गाजरका स्लाइसहरू, आलु क्युब्स, तेज पात, पानी र नुन थप्नुहोस्। हामी 30० मिनेट, बाँया पालो, चम्चाको वेग प्रोग्राम गर्दछौं।
उनीहरूसँग तापक्रम छैन ????
टिपका लागि धन्यबाद, लोरेना। यो पहिले नै सहि छ।
म आशा गर्दछु कि तपाईंलाई दाल like मन पर्छ
नमस्कार !! उनीहरू कति जना डाइनरको लागि हुन्? मलाई दिनहुँ तपाईका रेसिपीहरू प्राप्त गर्न मन पर्छ। धन्यवाद
धन्यबाद! हामी मनपराउँदछौं कि तपाईं हामीलाई लेख्नुहोस्।
म normal सामान्य सर्विंगका लागि भन्न चाहन्छु। घरमा हामीमध्ये (जना हुन्छौं (२ वयस्क र children बच्चाहरू) र त्यहाँ प्राय: ज्यादै थोरै हुँदैन।
मैले अहिल्यै यसलाई नुस्खामा राखें।
नमस्कार! पानीको त्यो मात्रा संग तिनीहरू सूफी वा बाक्लो छ? मेरो एस्केप म उनीहरु लाई मोटो हुन मन पर्छ !!
नमस्ते मारी कारमेन,
यदि तपाईं तिनीहरूलाई मोटो चाहनुहुन्छ, एक पटक भयो, तिनीहरूलाई गिलासमा केही मिनेटको लागि आराम गरौं।
के यो भाँडोको दालले बनेको हो? धेरै धेरै धन्यबाद 🙂
यो गर्न सकिन्छ तर यो फरक तरीका हो किनकि समय र पानीको मात्रा परिमार्जन गर्नु पर्ने हुन्छ ... पहिले तपाईंले तरकारीहरू पकाउनु पर्छ र त्यसपछि दाल थप्नु पर्छ। र यति धेरै पानी नराखीकन किनभने मैले रेसिपीमा उल्लेख गरेको भनेको दाल पकाउनको लागि चाहिने कुरा हो।
म तपाईको टिप्पणीलाई अभिव्यक्त मसूरको नुस्खा बनाउने छु! 😉
जाकेलिन अर्रेगा भन्यो
म कसरी थर्मामिक्स को उपयोग गर्ने जान्न को लागी, म केवल पिज्जा आटा को लागी प्रयोग गर्छु।
Jquelin arreaga लाई जवाफ दिनुहोस्
त्यो ठीक गर्न आवश्यक छ! हाम्रो पृष्ठमा दैनिक नजर राख्नुहोस् कि हामी तपाईंको Thermomix बाट अधिक प्राप्त गर्न हामी तपाईंलाई धेरै विचारहरू दिनेछौं। र हामीलाई उठ्न सक्ने कुनै प्रश्न सोध्न संकोच नगर्नुहोस्।
चढ्नुहोस् ... !! मसूरको दाम कत्तिको छ, विशेष गरी शाकाहारीहरूका लागि, मलाई यसको चिल्लो र धमिलो स्वाद मनपर्‍यो। तिनीहरूले मलाई मेरी आमाको सम्झना गराए। मैले तिनीहरूलाई क्यालाबसिन र तरकारीको ब्रोचको घनले समृद्ध तुल्याएको छु र मैले पहिल्यै पकाएको दाललाई गिलासको भाँडोमा प्रयोग गरिसकेको छु, किनकि मैले 600०० ग्राम मात्र पानी हालेको छ र मैले २ 25 मिनेट पकाएको छु, अन्तिम minutes मिनेटमा मैले जोडें खलिएको दाल तिनीहरू महान बाहिर आए! ती दुई सर्बिंगबाट बाँकी रहेका थिए, मैले तिनीहरूलाई १ मिनेटको गति -5-१० सम्म कुच्यो र म दाल भन्दा उत्तम, मसूरको दाल क्रीमको साथ छोडियो, चीज वा केही पनि नभए, सर्बिंगको अर्को जोडी बाहिर आयो। कस्तो राम्रो विकल्प डबल प्लेट! धन्यवाद!!
राम्रो छ कि पहिल्यै पकाइएको मसूरको साथ अनुकूलन। बधाई छ र हामीलाई भन्नुभएकोमा धन्यवाद।
म पनि सामान्यतया बाँकी रहेको पीस गर्दछु (जब ती बाँकी हुन्छन्) र त्यसैले म अर्को दिनको डिनर समाधान गर्दछु। जसरी यो सामान्य रूपमा मोटो हुन्छ, म यसलाई दुधले हल्का पार्छु र केही क्रन्ची क्रउटोनको साथ दिन्छु।
नमस्कार! मैले रेसिपी बनाएको छु र मलाई यो साँच्चिकै मनपर्‍यो, तर म जान्न चाहन्छु कि म पासेदार चिकनको स्तन थपेर यसलाई अद्वितीय थालमा रूपान्तरण गर्न सक्दछु। कुन बिन्दुमा मैले यसलाई थप्नु पर्छ ताकि मासु खराब छैन?
सुनकोलाई जवाफ दिनुहोस्
कुखुराको बारेमा राम्रो विचार! म यसलाई राख्छु जब हामी दाल थप्छौं, ताकि यसले तिनीहरू र तरकारीहरू पकाउँदछ।
तपाईं मलाई कस्तो लाग्नुहुन्छ मलाई बताउनुहुन्छ।
अय्या कस्तो भ्रम हो जुन तपाईंले मलाई जवाफ दिनुभयो! धन्यवाद !! म यसलाई कसरी कार्य गर्दछु भनेर हेर्नको लागि यस तरीकाले प्रयास गर्नेछु। मेरो प्रश्न यो थियो कि यदि पानी वा सॉसको साथ। जब म गर्छु, म तपाईंलाई यसको बारेमा यहाँ बताउँछु।
गएको वर्ष मेरो आमाबाबुबाट क्रिसमसको उपहार मसँग तपाईंको पुस्तक छ, ​​जुन मेरो विदेशमा बस्ने भएकोले मेरो सुटकेसमा आएको थियो।
के तपाईं पनि बाहिर हुनुहुन्छ? आइन्स, एक्सप्याट लाइफ कत्तिको गाह्रो छ, हैन? hehehe 😉
म किताब को बारे मा धेरै उत्साहित छु! आशा छ तपाईले यो मन पराउनु भएको छ।
हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद।
हो, म अहिले तीन वर्षदेखि फ्रान्समा बस्दैछु, तपाईलाई थाहा छ "अध्ययन गर्नुहोस् र तपाईं टाढा जानुहुन्छ" किनकि म मेरो घरबाट 2000 किलोमिटर गएको छु।
पुस्तक महान छ, म रेसिपीहरू अलि अलि गर्दै गर्दैछु, त्यहाँ धेरै छन्!
एक चुम्बन 🙂
राम्रो छ कि तपाई पुस्तक लाई मनपराउनुहुन्छ।
निस्सन्देह, विदेशमा बस्नु भनेको एक अनुभव हो, रमाइलो गर्नुहोस्! 😉
नमस्कार, यदि पप्पिका राख्नुको सट्टा तपाईंले पाउडर करी थप्नुभयो भने, तिनीहरू पनि धेरै स्वादिष्ट हुन्छन्।
म करी कुरै प्रयास गर्नेछु, यो एक राम्रो सुझाव जस्तो देखिन्छ 😉
मलाई दालको लागि यो नुस्खा मनपर्‍यो, थर्मामिक्स हुनु भन्दा पहिले वा तिनीहरू धेरै तरल वा शोरब वा कूकड बिना वा रेजिमेन्टको लागि बाहिर आउँथे, यो नुस्खाको साथ म उत्कृष्ट पाउँदछु र हामी मेरो परिवारका members सदस्यहरू खान्छौं र उनीहरू सबैलाई यो मनपर्दछ। धेरै धेरै धन्यवाद।
तपाईं मलाई कस्तो आनन्द दिनुहुन्छ 🙂 धेरै धेरै धन्यबाद, सुसाना !!
दालहरू सधैं मेरो लागि थर्मोमिक्समा एकदम नराम्रोसँग परिणत भएको थियो, तर यस नुस्खाको लागि धन्यवाद उनीहरू स्वादिष्ट छन्।
कति राम्रो Marisol !! हामीलाई बताउन को लागी धन्यवाद 🙂
अहिले यो चिसो भएको छ, तिनीहरू एक अर्काको कदर गर्दछन्, उनीहरू स्वादिष्ट छन्
तपाई किन योलान्डा हुनुहुन्छ। धन्यवाद!
नमस्कार! म तपाईंको व्यञ्जनहरुमा हुकिएको छु, प्रत्येक दिन म फरक बनाउँछु, र म जित्छु! तर जब यो दालको कुरा आउँछ, मसँग सँधै एउटा अति नै आधारभूत प्रश्न हुन्छ: के दालको मात्रा भिज्नुभन्दा अघि वा पछाडि दर्साउँछ? धन्यवाद र बधाई छ।
कस्तो राम्रो लारा! तपाईले हामीलाई भन्नु भएको कुरा हामीलाई पढ्न मन पर्छ
दालको लागि, हामी सँधै भिजाउनु अघि भिगोनु अघि।
मुरी मुरी धन्यवाद !!
धेरै धनी, म तिनीहरूलाई काम गर्न लिन तयार।
छोटो मसूरको साथ हेलो के यो उही पकाउने समय हो?
मूर्त स्वरमा जवाफ दिनुहोस्
मलाई तेस्तै लाग्छ। तर मिसिन समय-समयमा रोक्नुहोस् कि उनीहरू भत्किएन भनेर जाँच गर्न।
Years बर्षमा रेसिपी अपलोड गरे पछि पहिलो सफलता प्राप्त भयो! आज मैले जुचीनी जोडेको छ र हामी खुसी छौं !!!
धेरै धेरै धन्यवाद, योलान्डा !! यो तपाइँको जस्तै टिप्पणीहरू पढ्न राम्रो लाग्यो 🙂
के तपाईं २ घण्टा भन्दा बढि आराम गर्नुहुन्छ?
PATRICIA लाई जवाफ दिनुहोस्
यो ठीक छ, पेट्रसिया। तर दुई घण्टा पर्याप्त छ।
म नुस्खा बनाउन चाहन्छु तर मँ यो परिमार्जन गर्न चाहान्छु। पहिले म लीक, प्याज र लसुन फ्राई गर्न चाहन्छु। अर्को, फ्राई मिर्च, गाजर, टमाटर र बे पत्ती। अन्तमा म आलु, सिमी र मसूर थप्ने थिएँ। तर ... सबै अवस्थामा खाना पकाउने समय र तापक्रम के हुन्छ?
पहिलो हलचल फ्राईको लागि तपाईं १०० ° (वा १०० टीएम on मा), program मिनेट, गति १ प्रोग्राम गर्न सक्नुहुनेछ। जब तपाईं मिर्च, गाजर थप्नुहुन्छ ... म समान तापमान र गति सेट गर्नेछु करीव minutes मिनेट र बेकर बिना। । पहिलो चरणमा तेल नबिर्सनुहोस्! एकपटक तपाईंले दाल राख्नु भएपछि, नुस्खामा दर्शाईए अनुसारका चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस् (min० मिनेट, १०० डिग्री, बायाँ मोड, चम्चा गति)।
तपाईं हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ कसरी तिनीहरू भएको थियो।
योर्बीलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते योर्बी। एउटा विचार गर्नुहोस् कि ... सानो सुरु गर्नुहोस् र बढि थप गर्नुहोस् तपाईंले उत्तम पोइन्ट प्राप्त नगरेसम्म।
नमस्कार! मैले भर्खरै मेरो डाईटको कारण यी दालहरू बनाएँ र ती साँच्चिकै राम्रो बाहिर आए। मैले बनाएको केही परिमार्जनहरू ... मैले प्याज र लसुनको साथ फ्राई गर्न कुचोलेको टमाटर थपेको छ, र यसले राम्रो स्वाद छोड्दछ। मैले आलु हालेको छैन र म चोरिजो वा हेम मिस गर्न आएको छैन। थोरै थप पानी र एक व्यक्ति उदार चुटकी नुन प्रति व्यक्ति।
धेरै राम्रो पकवान। धेरै रेसिपीहरू र सुझावहरू योगदान पुर्‍याउनु भएकोमा धन्यवाद।
नमस्ते !!! मैले आज यो नुस्खा बनाएको छु र त्यतिबेला तिनीहरू कच्चा हुन्छन्, म दुई पटक राख्छु, एक पोरिजो एकै समयमा काटियो मसूर र कुखुराको ब्रोब्लेट ट्याब्लेट र धेरै स्वादिलो।
हर्मालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, हर्मा! यहाँ मसूरको विविधतासँग यसको धेरै चीज हुन्छ। मलाई खुशी छ कि तपाईले यसलाई अधिक समय निर्धारित गरेर समाधान गर्नुभयो। Chorizo ​​सँधै एक राम्रो साथी हो यो फली 🙂 को लागि